Labo katirsan maleeshiyada ISIS oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandLabo katirsan maleeshiyada ISIS oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Puntland
May 23, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maleeshiyaad katirsan ISIS. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Labo katirsan maleeshiyada ISIS ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Puntland, sida ay bayaan ku sheegeen taliska Mareykanka ee Afrika maanta oo Khamiis ah.
Duqeynta ayaa Arbacadii ka dhacday Buuraha Golis, bayaanka ayaa intaas ku daray.
Waa weerarkii shanaad oo ka dhan ah ISIS tan iyo 14-kii April, markaas oo duqeyn lagu dilay hoggaamiye ku xigeenkii ISIS Cabdixakiin Dhoqob.
Intii lagu guda jiray bishaan May, 17 dagaalyahan oo ISIS katirsanaa ayaa lagu dilay labo duqeymood oo Mareykanku uu ka geystay gudaha Puntland.
Waxay u muuqata in Mareykanku uu hadda bartilmaameedsanayo kooxda ISIS ee ku sugan gudaha Puntland.
Maleeshiyada ISIS ayaa kacdoonkeeda ka bilowday gudaha Puntland dabayaaqadii sanadkii 2015.
March 19, 2020 Guddiga doorashooyinka Puntland oo ku dhawaaqay liiska 17 urur siyaasadeed oo isdiiwaangeliyay